Eletrik acha anụnụ anụnụ, agba ọgbara ọhụrụ na agba maka ụlọ gị | Bezzia
Eletrik acha anụnụ anụnụ, agba ọgbara ọhụrụ na agba egwu maka ụlọ gị
Maria onyekwere | 10/01/2022 20:00 | Trendschọ mma nke ọma
Ọ bụrụ na ị na-achọ agba nke iji nye a ndetu nke ọgbara ọhụrụ na obi ike maka ụlọ gị, Echela maka ya ọzọ, acha anụnụ anụnụ eletrik bụ agba gị. Anyị enweghị ike ịsị na ọ bụ agba agba dị ka Peri nke ukwuu, Agba Pantone nke Afọ 2022, nke ka njọ bụ mgbe niile ezigbo nhọrọ iji nweta oghere jupụtara na àgwà.
Ime ụlọ gị ọ chọrọ ọkụ ọkụ? Ị maghị ka esi etinye agwa n'ime ụlọ ọcha na-enweghị nnukwu ego? Ọ bụrụ na ị were ihe na-egbuke egbuke, eletrik na-acha anụnụ anụnụ ọ ga-abụ ezigbo enyi. Ị nwere ike ịcha mgbidi ma ọ bụ ọnụ ụzọ na agba a ma ọ bụrụ na ịchọrọ imebi ihe ọ bụla ma ọ bụ jiri akọ mee ihe na obere ngwá ụlọ ma ọ bụ ihe nkà. Na Bezzia anyị na-ekerịta echiche gị taa.
Ọ nwere ike iyi ka a siri ike na agba iwebata n'ime mma nke ụlọ anyị, ma nnọọ na-abụghị; eletrik na-acha anụnụ anụnụ ọ bụ nnọọ vasatail agba ma jikọta nke ọma na ọtụtụ agba ndị ọzọ. Ọ bụ agba na-adọrọ adọrọ, nke a na-apụghị ịgbagha agbagha, ya mere ọ dị mkpa ka anyị mara ebe anyị chọrọ itinye onwe anyị n'ihe ize ndụ ma ọ bụ otú obi siri anyị ike, n'ihi na ka oge na-aga, ọ nwere ike ịgwụ anyị.
Ime ụlọ, ụlọ iri nri na ime ụlọ Ha bụ ọnụ ụlọ nke anyị nwere ike iji na-acha anụnụ anụnụ na-egwu egwu n'atụghị egwu ma anyị lekwasịrị anya na ha n'isiokwu a. Ị chọrọ echiche iji tinye ya na otu na nke ọzọ? Taa ị ga-ahụ na nhọrọ nke ihe oyiyi anyị niile mkpali ị chọrọ ime ya.
1 N'ime ụlọ iri nri
2 N'ime klas
3 N'ime ime
N'ime ụlọ iri nri
Ilele onyonyo ndị a enweghị mgbagha: oche ndị ahụ ha na-aghọ ihe kachasị ewu ewu na-ejikọta na-acha anụnụ anụnụ eletrik na ụlọ iri nri. Ọ bụghị ezigbo echiche ịse ma ọ bụ megharịa oche ochie gị na-acha anụnụ anụnụ eletrik? Ya mere, ị nwere ike inye ha ndụ nke abụọ ma nweta mmetụ ọgbara ọhụrụ na obi ike n'ime ụlọ iri nri gị n'otu oge ahụ.
Ị na-achọ ụzọ ọzọ mbụ? Nzọ na eserese na clowns na tebụl na agba a ma ọ bụ amaja tinye kọbọd na-acha anụnụ anụnụ n'akụkụ tebụl osisi gị. Ma egbula oge ịse mgbidi na agba a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ụlọ iri ihe a ma ama n'ime nnukwu oghere dị ka kichin ma ọ bụ ime ụlọ.
Ime ụlọ na-abụkarị ọnụ ụlọ kasị ukwuu n'ime ụlọ ahụ, nke na-enye gị ohere iji ihe dị egwu mee ihe n'ezie. Gịnị mere agba mgbidi Ma ọ bụ ọnụ ụzọ dị n'ime na-acha anụnụ anụnụ eletrik? Ọ ga-awụ akpata oyi, enweghị obi abụọ banyere nke ahụ. Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-ekpuchi kabinet TV na mgbidi a na-acha anụnụ anụnụ? Ọ bụ echiche mara mma n'ime ụlọ dị ka nke dị na foto a nke nwere ala gbara ọchịchịrị na mgbidi na-acha ọkụ ọkụ na arịa ụlọ.
Otu oche, oche ma ọ bụ sofa bụ ụzọ ndị ọzọ iji jikọta agba ọgbara ọhụrụ a na-atụ egwu n'ime ụlọ. Na ị nwere ike ime ya n'agbanyeghị ụdị ụlọ a dị ka ị na-ahụ na foto dị n'elu. Ihe si na ya pụta na-atụ egwu mana ọ bụrụ na ị na-eji agba na-anọpụ iche dịka ihe mgbakwunye, ị ga-eme ka ohere ahụ dị mfe.
Ọrụ nka na textiles Ha bụ ụzọ ọzọ isi tinye brushstrokes na-acha anụnụ anụnụ n'ebughị ibu dị arọ. Ihe mkpuchi na sofa na ụda na-acha ọbara ọbara, ite na tebụl kọfị ma ọ bụ mbipụta geometric na mgbidi nwere ike ezuru gị.
Igwe isi na-acha anụnụ anụnụ eletrik ga-enwe ike ịgbanwe ụlọ ime ụlọ dum. A sị ka e kwuwe, nke a bụ isi mgbidi nke ụlọ ahụ, ebe a na-eduzikarị anya niile. Ị chọrọ itinyekwu ihe n'ihe ize ndụ? Tee ma ọ bụ kpuchie mgbidi ahụ na-acha anụnụ anụnụ wee gbakwunye ihe nkwụ n'otu agba n'elu akwa iji mepụta ihe na-aga n'ihu.
Ị nwekwara ike itinye blue a na-acha anụnụ anụnụ site na akwa akwa, na mkpuchi duvet ma ọ bụ plaid n'àkwà gị na-eyi uwe ọcha. White bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, otu n'ime agba na-ejikọta na-acha anụnụ anụnụ eletrik, ma ọ bụghị naanị otu; obere nuances na niile uhie, oroma, mọstad ma ọ bụ elu; Ha ga-adaba nke ọma na nke a.
Eletrik na-acha anụnụ anụnụ ọ na-amasị gị? Ị na-anwa anwa itinye ya n'ime ihe ịchọ mma nke ụlọ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Trendschọ mma nke ọma » Eletrik acha anụnụ anụnụ, agba ọgbara ọhụrụ na agba egwu maka ụlọ gị
Uwe elu na akpụkpọ ụkwụ dị elu, ngwakọta zuru oke na oyi